ဧရာဝတီတိုင်း + ပြည်နယ်၂ … က(၁၀)တန်းဖြေမဲ့ကျောင်းသားဒေတာတွေ ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဧရာဝတီတိုင်း + ပြည်နယ်၂ … က(၁၀)တန်းဖြေမဲ့ကျောင်းသားဒေတာတွေ ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားပြီ
ဧရာဝတီတိုင်း + ပြည်နယ်၂ … က(၁၀)တန်းဖြေမဲ့ကျောင်းသားဒေတာတွေ ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားပြီ
Posted by Davit on Nov 27, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
မနက်စောစောစီးစီး ဒေးဗစ်တို့အိပ်နေတုန်း ….ဖေါက်…ဖေါက်…ဖေါက်….ဆိုတဲ့အသံတွေကြားလို့ အိပ်ရာကထပြီး အပြင်ကို ကြည့်လိုက်တော့….အလဲ့…. မြူလေးတွေဆိုင်းနေတာမှ ခါတိုင်းနေ့ကထက်ပိုတယ်ပေါ့…… မြူတွေကတစ်နေရာတည်း ကပ်ပြီး ထူနေလို့ သေခြာကြည့်ခါမှ ….. အ လာ လား……….မီးဗျို့ ……မီးတွေလောင်နေတာမှ ရှယ်ကိုလောင်နေတာ…… ဒါနဲ့ မျက်နှာတောင်မသစ်ရသေးပဲနဲ့ မီးလောင်တဲ့နေရာသွားကြည့်တော့မှ လောင်တဲ့နေရာက …… နာမည်ကြီး ၁၀တန်းအောင်စာရင်းတွေ ထုတ်တဲ့ လှိုင်တက္ကသိုလ် RC2ထဲက ဇွဲကပင် ဆောင်ကြီးရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာလောင်နေတာဗျို့….. ဒါနဲ့ လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဖုန်းနဲ့ 191 ကိုပထမဆက်တယ်….ဟုတ်ကဲ့… မရဘူးခင်ဗျ…. ၅ မိနစ်လောက် ဆက်တိုက်ခေါ်တယ်….. လုံးဝမှ လုံးဝပါပဲ….လိုင်းမအားဘူး…. ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ သေခြာပြီ …. ကိုယ့်လိုပဲ မီးသက်ကိုလှမ်းအကြောင်းကြားတဲ့သူရှိတယ်ပေါ့ …. ထပ်ပြီးသေခြာအောင် ၁၉၉ ကိုထပ်ဆက်တယ်…. ဖုန်းကိုင်တယ်ခင်ဗျ ….. ကိုယ်ကလည်းလှမ်းပြောလိုက်တယ် “ကျွန်တော်တို့နားက ဇွဲကပင်ဆောင် မှာမီးလောင်နေပါတယ်….မီးတောက်တော်တော်ကြီးပါတယ်…၁၉၁ ကိုဆက်တာဖုန်းမအားလို့ တစ်ဆင့်ပြောပေးပါဆိုတော့ စိတ်ချပါ” ဆိုပြီးချသွားတယ်…စောင့်တယ်ခင်ဗျ…15မိတစ်လည်း ကားမလာ၊ နာရီဝက်ရှိပြီ မလားသေး….၄၅ မိနစ် …. ဟင့်အင်း မလာသေးဘူးဗျ…. ၅၀ မိနစ်လောက်လည်းကျရော ဝေါ….ဝေါ…ဝေါ… ဆိုပြီး မရမ်းကုန်း+လှိုင် မီးသက်ဌာနကကားတွေရောက်လာတယ်ဗျာ…. ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာ လှိုင်မီးသက်နဲ့ ဇွဲကပင် ဆောင်တို့ဆိုတာ စက်ဘီးနဲ့သွားရင်တောင်(ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းကိုပြောတာဟုတ်ဘူးနော်) ၇ မိနစ်လောက်ပဲကြာတာဗျာ…ဘယ့်နှယ်…၅၀ မိနစ်လောက်ကြာသတုန်းပေါ့…. ဒါနဲ့ သူတို့လည်းမီးငြှိမ်းတယ်ဗျာ… နာရီဝက်နီးပါးလောက် မီးငြှိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ မီးသေသွားတယ်…. နောက်ဆုံးသိလိုက်ရတာက ဒီနှစ် ၁၀တန်းဖြေမဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပြည်နယ်၂ ….. အစရှိတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနှစ်ခုက ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ Data တွေ လုံးဝပြန်မရတော့ဘူး…အားလုံးပြာဘဝရောက်သွားတယ်… ကျန်တဲ့ဒေသကြီးတွေကတော့ မီးမလောင်လိုက်ပေမဲ့ ရေစုံမြောတယ်…. ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်ကြမယ်တော့မသိဘူး….. ဝါယာရှော့ကစဖြစ်တာပါတဲ့…. မီးစလောင်နေတာ ၅ နာရီမထိုးခင်ကလည်းကလို့သိရပြီး…. ကျိပ်ပြီး ငြှိမ်းနေတာပါတဲ့….ဒါပေသိ… လောင်စာက စာရွက်စာတန်းတွေချည်းဆိုတော့…. မီးခိုးတွေအူပြီး ကြာတော့ မွှန်လို့မငြှိမ်းနိုင်တော့တာပါ….. အော်…. မီးသက် မီးသက် ……… မိနစ် ၅၀ မီးသက်ပါလား…..
ပုံမတင်တတ်တော့ သေးသွားတယ်ဗျို့ ………… ခွင့်လွှတ်ပါရွာသူ/သားတို့ရေ…..
ဒီသတင်း ဂေဇတ် မှာ ပဲ တွေ့ သေး တယ်။ ဒါမှ စီဂျေ အစစ် ။
ရှားပါး သတင်းလေးအတွက် ဗရာဗို ပါ ဗစ်ဗစ်ရေ…
တော်သေးတာပေါ့ဗျာ …ကိုယ်ရေးအချက်ကအလက် ဒေတာက ပြန်ကောက်လို့ရပါသေးတယ်..
စာမေးပွဲဖြေပြီး အမှတ်ခြစ်နေတဲ့အချိန် အဖြေလွှာတွေ လောင်လို့ကတော့ အကုန် နားကားပီ
နိုင်ငံတကာမှာ တစ်ခါမှ မရှိဖူးသေးတဲ့…
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ၁၀၀% ပြည့်အောင်တဲ့နိုင်ငံ ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင်သွားမယ်…
အအောင်ပေးရအောင် အဖြေလွှာတွေ လောင်တာမှ မဟုတ်တာ..
၁၁လပိုင်းလကုန်ရက်ဆိုတော့ … စာမေးပွဲဖြေဖို့ ရေစစ်စတာ လုပ်ထားတဲ့
ကျောင်းသားကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ ….
စိတ်နဲ့ ဒို့နဲ့ညစ်တယ် … စောင်မွဲက ဘယ်လမှာ စစ်လို့
အောင်စာရင်းက ဘယ်လမှာထွက်တာလဲ ဆိုတာလေးလည်း …
စုံစမ်းမေးမြန်းပါအုံး ..အူးလေး လစ်ဘရယ် ဖက်ရယ်..
အဆောင်မှူးကတော်တွေ၊ အဆောင်ညစောင့် ကတော်တွေတော့ ငိုကြီးချက်မနဲ့ တွေ့ရတယ်ဗျို့ ……… စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာ….. စာရွက်လေးတွေ စာရွက်ကြီးတွေကတော့ ရေစုန်မှာမြောနေတာတော့ မြင်မကောင်းဘူးဗျာ….
ခုမှသတိရလို့….. ကိုဗိုက် ဘီအီးဖိုးမရှိရင် လုပ်စားမယ်ဆိုတဲ့ နေရာလေးဖြစ်သွားတော့ …… ကိုဗိုက်တော့ ဂွင်ပျက်သွားပြီ…. ဟ ဟ…
ဒါကြောင့်မနက်က မီးသတ်ကားသံတွေညံနေပါတယ်လို့ အော် ဆယ်တန်းဆိုတာ
ဆန်းတယ်တဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ် ……….
အလှူခံမယ်မထင်ဘူးဗျ….လောင်သွားတာက စာရွက်စာတမ်းတွေ နဲ့ သုံးလို့မကောင်းတော့တဲ့ ပရိဘောဂ အဟောင်းတွေပါ… နှမျောဖို့ကောင်းတာက ဒီနှစ် ၁၀ တန်းဖြေဖို့ ပေးထားတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ Data တွေပါ။ ဧရာဝတီတစ်တိုင်းလုံးနဲ့ ပြည်နယ်၂ က ဒေတာတွေပါ……
အဲဒီ ဒေတာတွေကို လျှပ်စစ်အသွင်ပြောင်းပြီး အချက်အလက်အခြေတွေ (Database) တွေအဖြစ် သိမ်းထားရင် အိုက်လိုပြသနာတွေမကြုံနိုင်တော့ဘူး…
Change… Change… Change
ဟုတ်ပါတယ် အဲ့ဒီ ဒေတာတွေ လက်ခံတာ ကွန်ပျုတာစနစ်ပြောင်းဖို့ သင့်နေပါပြီ။
အချိန်ကုန်တယ် လူပန်းတယ် နေရာပုပ်တယ် ။
အဲ့ဒီဌာနတင် မဟုတ်ဖူး မြန်မာတပြည်လုံးက တက္ကသိုလ်ဌာနတွေ အားလုံး အဲ့လိုပဲ ပြောင်းသင့်နေပါပြီ။
ခုလိုဒီဇင်ဘာဆို ကျောင်းဝင်ခွင့်လက်ခံတာ ကျောင်းအပ်ရတာ မေဂျာတခု လူထောင်ချီတော့ ကျောင်းသားတွေ ပြွတ်ပြုံတိုးနေတတ်တယ်။ နောက်မစောင့်နိုင်သူများ ကျောင်းသားရေးရာကလူကို ပိုက်ဆံပေးအပ်ခိုင်းတတ်တယ်။ ငွေပေးတော့လည်း အဆင်ကိုပြေလို့ ။ အချိန်ကုန် လူပန်း တဲ့ စနစ်ကြီးတော့ အမြန်ပြင်ပါစေ လို့ ………
ပြင်ဖို့အတွက် ဘယ်မလဲ .. ရန်ပုံငွေ .. …. နောက်ပြီး ဒါမျိုးက .. တစ်ကျောင်းထဲ ကွက်ပြင်လို့ ရတဲ့ ဟာ မဟုတ်ဘူး …. လက်တွေ့ကြတဲ့ အကြံ လေး .. ၀ိုင်းပေးကြစေချင်ပါတယ် … Change … ဆိုတာ အော်လို့ ကောင်းတဲ့ စာသား ပေမယ့် …… အော်ရုံ ပဲ အော် နေလို့ မရပါဘူး .. လို့ …………..
အဲ ………………….. ဒါ ……………………. လေး …….
ဟုတ်ပါ့ကိုကြီး ကြီးမိုက်ရာ …….. တဂျီးဦးခိုင် က RC-2 ထဲက ယောက်ကျားလေးအဆောင်တွေရဲ့ ပုံတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့နောက်…. ကင်မလာကြီးကိုင်ပြီး လျှောက်ရိုက်မလို့ ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်… သို့ပေသိ…ဟိုကလိုလို…ဒီက လိုလိုနဲ့ ဝိုင်းကြည့်ပြီး သြဘာပေးကြတာကြောင့် မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာ….. ဦးခိုင်ရေ….လောလောဆယ်တော့ အနော်အခုတင်ထားတဲ့ “ဇွဲကပင်” ဆောင်လေးကိုပဲကြည့်တော့နော်….
ကလေးတွေ တစ်ခါထပ်ပြီး လျောက်လွှာတင်ရအုန်းတော့မပေါ့။ ခုတော့လျောက်လွှာတင်တာ ပိုက်ဆံကုန်သေးလားတော့မသိဘူး။ အနဲ နဲ့အများတော့ကုန်မှာပါ။ မြန်မာစာစစ်အဖွဲ့ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ဆို
တော့ကာ အစအဆုံး သူတို့တာဝန်ယူပြီး ကလေးတွေပိုက်ဆံထပ်မကုန်အောင်လုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။
deta တွေကို စာရွက်စာတမ်းနဲ့ မမှတ်ဘဲ ကွန်ပျူတာထဲမှာမှတ်မယ်။
HDD နှစ်ခုလောက်ထဲမှာကူးထားမယ် ဆိုရင်မှတ်ထားတဲ့ Deta တွေအခုလို
မီးလောင်တာတို့ ရေနှစ်တာတို့ စတဲ့အန္တရာယ်ကနေဝေးမှာပေါ့။
လိုအပ်တဲ့ အချက်အလတ်ကို ပြန်ရှာချင်တဲ့ အခါမှာလဲ အင်မတန်လွယ်ကူမှာပေါ့
အခုဟာကတော့ဗျာ ကညန ရုံးသွားရင်လဲ ဟိုစာရွက်ရှာ ဒီစာရွက်ရှာ လ၀က ရုံးသွားရင်လဲ
ဆယ်ပေပတ်လယ် လောက်ရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ စာရွက်တွေကို စင်နဲ့ထားတာ ပြည့်ကျပ်နေတာပဲ
ကွန်ပျူတာလေးနဲ့များလုပ်မယ်ဆိုရင် စာပွဲခုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ပြီးသွားမယ့် ကိစ္စကို
ရှေးထုံးမပယ် ဈေးသုံးမကြွယ်ဆိုတော့ ရှေးရိုးအစဉ်လာအတိုင်းပဲ တစ်နှစ်လာလဲ ဒီတိုင်း နှစ်နှစ်လာလဲ
ဒီတိုင်း လင်းလင်း သီချင်းလိုမျိုး အက် အက် အက် ကြောင်းထပ်လဲ မပြောင်းလဲဘူးပေါ့
NeatDesk – High Speed Desktop Scanner & Digital Filing System
Transform your workspace with NeatDesk,adesktop scanner and digital filing system that helps you get organized. Available for PC & Mac.
အဲလိုစက်မျီုးသုံးပြီး.. ဒေတာတွေထည့်ရင်.. ဒေတာအင်န်ထရီက..တော်တော်အလုပ်သက်သာမယ်ထင်ပါတယ်..။